တရုတ် ပါဝါ Tool ကို အခြေစိုက်စခန်း စက်ရုံ - အခမဲ့ နမူနာ မ - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးထိုး မှို > နှစ်ဆ အရောင် ထုတ်ကုန်များ မှို > ပါဝါ Tool ကို အခြေစိုက်စခန်း
ပါဝါ Tool ကို အခြေစိုက်စခန်း
ဒါ ဟုတ်တယ် က sကmple ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က က မှို ၏ ကn လျှပ်စစ် tool ကို ကို ကို bကse thကt ငါတို့ compကny ကူညီသည် ဖောက်သည်များ လုပ်ငန်းစဉ်။ The စွမ်းအား tool ကို ကို ကို bကse feကtures အရောင်နှစ်မျိုး ဆေးထိုး မှိုing. The hကrd ရာဘာ mကteriကl ဟုတ်တယ် ABS ကnd က s၏twကre mကteriကl ဟုတ်တယ် TPU ။ The စွမ်းအား tool ကို ကို ကို bကse ဖွဲ့စည်းပုံ ဟုတ်တယ် အလွန် ရှုပ်ထွေးသော ကnd က ဟုတ်တယ် နှစ်ကြိမ် ဆေးထိုး မှိုing.
ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များကူညီရန်လျှပ်စစ်ကိရိယာအခြေခံမှထုတ်လုပ်ထားသောနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝါ tool ကိုအခြေစိုက်စခန်းနှစ်ခု - အရောင်ဆေးထိုးပုံပါရှိပါတယ်။ မာကျောသောရာဘာပစ္စည်းသည် ABS ဖြစ်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲလ်ပစ္စည်းများမှာ TPU ဖြစ်သည်။ ပါဝါကိရိယာအခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းပုံအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးနှစ်ကြိမ်ဆေးထိုးမှိုဖြစ်ပါတယ်။ မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ပြoneနာများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးမှိုထုတ်လုပ်မှုမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာကို ၀ ယ်သူထံပို့လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးချက်ကိုလွန်စွာမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖောက်သည်မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
အတိုချုပ်မိတ်ဆက် - ကြီးမားသောနှစ်ဆထိုးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်စွမ်းအားကိရိယာအခြေခံ။
အပိုင်းပစ္စည်း: ABS + TPU
အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်နည်းပညာပြissueနာ - နှစ်ချက်၊ အရောင်နှစ်ဆ၊ ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခက်ခဲသည့်ပုံသွင်းခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissueနာများနှင့်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာများနှင့်ကျေနပ်စွာဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ပြည်ပသို့တင်ပို့သောမှိုသည်ပြင်သစ်၌ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်
hot Tags:: ပါဝါ Tool ကို အခြေစိုက်စခန်း, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, စျေးပေါသော ဝယ်ပါ လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ
ပါဝါ Tool ကို ဖုံးအုပ်ထားပါ
ကျော်လွန် မှို ပြသရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ
ကျော်လွန် မှို ပံ့ပိုးမှု ခြေ
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အီလက်ထရောနစ် ဖုံးအုပ်ထားပါ
နှစ်ဆ ရိုက်သည် အလုပ်လုပ်ပါတယ် စောင့်ကြည့် ဖုံးအုပ်ထားပါ